Mpanohitra izay tsy mahazo toerana… | NewsMada
Prix des carburants: l’heure de vérité ...juin 19, 2019
Fandratrana olona teny Ampitatafika: samy MD ireo zanaka polisy sy ireo niharan’ny herisetra ...juin 19, 2019
Prix des carburants: une baisse à vocation sociale
Hita tao anaty “camera de surveillance”: tratra tao anaty famoran-jaza teny Anosivavaka ireo jiolahy
Prix des carburants: l’heure de vérité
Fandratrana olona teny Ampitatafika: samy MD ireo zanaka polisy sy ireo niharan’ny herisetra
Militaires écroués à Tsiafahy: le SMM dénonce des “menaces contre les magistrats”
Zaza telo naiditra hopitaly: mitobaka eny an-tsena ny kilalao mampidi-doza
Législatives: la balle est dans le camp de la Hcc
Hampanambadiana Sinoa: tratra ireo mpianaka mpanondrana vehivavy mankany Chine
Disparation d’enfants: cinq cas signalés par jour
Ahina ho nanao kolikoly teny amin’ny RN4: natolotra ny fampanoavana ireo zandary telo lahy
Mpanohitra izay tsy mahazo toerana…
Par Taratra sur 14/01/2019
Arahaba soa, arahaba tsara… Ranolava ny fiarahabana ny filohan’ny Repoblika vaovao: avy any ivelany, indrindra ny avy eto an-toerana. Amin’izany, samy mitanisaisa fiaraha-miasa, mamisavisa izay tokony hatao miaraka. Tsy misy maharatsy izany.
Aiza ho aiza amin’izany ireo hoe mpanohitra? Indrindra ireo namisavisa ny mety hisian’ny korontana, adilahy politika… Ny hamisavisana ny ratsy mba hiavian’ny soa? Inoana sy antenaina fa haharitra filaminana, fa tsy ho am-boalohany ihany.
Tsy hisy mpanohitra tokoa ve? Na hitovy fijery sy iray lalana avokoa ny rehetra… “Mpitondra mbola tsy niasa kosa ve?”, hoy ny sasany; “Avela hiasa hifanatrehana… “, hoy, angamba, ny hafa. Na izany aza, ny foto-kevitra no tokony hitondra ny fanoherana.
Tonga amin’izay adihevitra ny amin’ny tsy fitoviam-pijery izay ve ny mpanao politika malagasy? Na ny maro aminy… Foto-kevitra sy vinam-piarahamonina ary fandaharanasa amin’izany no mitondra amin’ny fanohanana na fanoherana.
Amin’izao, na izay faran’ny nifanao atsimo sy avaratra amin’ny fomba fijery hatramin’izay aza, milaza tena ho manohana sy vonona hiara-kiasa. Nahoana? Tsy mahagaga, mbola ny toerana sy izay azo isarangotana amin’izany aloha no mahamaika.
Rehefa vita eo ny fizarana andraikitra, na izay heverina ho nitovy fijery amin’ny tena hatramin’izay aza: mety hanome lamosina, sanatria. Mbola ho izany ihany ve ny fanaovana politika eto Madagasikara? Tsy mba hisy izay fiovana sy fanovana.
Izay rehetra tsy mahazo seza no hoe lasa mpanohitra? Amin’izany, mbola fitadiavan-tseza aloha ny fanoherana. Rehefa tsy hita izay mangirana amin’izany, mivadika ho zavatra hafa amin’izay: mety ho tonga amin’ny tsikera befahatany, fandravana…
Mba hisy fivoarana amin’izay ve ny fanaovana politika? Ny tena mahay, ny toerana no mitady azy fa tsy izy no mitady toerana; tsy hoe voatery hanohitra rehefa tsy nahazo toerana; tsy mpanakorontana sy mandrava ny hoe mpanohitra…
Secteur agricole: le Royaume du Maroc renforce son appui 20/06/2019
Can 2019: les Barea débarquent en dernier 20/06/2019
Taekwondo –Grand Open du TCM: plus de 80 combattants attendus à Manjakandriana 20/06/2019
Jioi 2019: la comparaison est de mise 20/06/2019
Basketball: la ligue junior NBA débarque à Madagascar 20/06/2019
Eco brèves: distribution de kits solaires individuels à travers le projet Johary